Commandos 2 HD Remaster yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Commandos 2 HD Remaster yeLinux
Dai iwe uri mumwe we vateveri vazhinji vemutambo wevhidhiyo Commandos 2, iwe une rombo rakanaka. Iye zvino zvinouyawo kune yako yaunofarira GNU / Linux kugovera. Asi hazviite nenzira yakajairika, sezvakaitika nemitambo yekare yevhidhiyo senge Ewjim, iyo yatiri kutaura nezvayo mune ino blog. Uku hakusi kutangazve kuri nyore kwemutambo wevhidhiyo kubva kare. Ino nguva iri zita iro rakagadziridzwa nemagiraidhi ari nani kuti iwe ugone kuona mepu uye mavara ane mhando iri nani pane yepakutanga.
Musoro wemutambo mutsva wevhidhiyo ndiwo Commando 2 HD Remaster, asi kunyangwe paine shanduko mumifananidzo yakagadziridzwa, ichiri iine mutambo mumwechete, vatambi, skrini nezvose zvawaive nazvo mune zvekare. Zvese zvinhu zvichave zvakafanana asi uine zvirinani kuona chiitiko. Sezvinotarisirwa, unogona kuiwana muzvitoro zvinoverengeka, asi inonyanya kuzivikanwa ndeye Steam kubva Valve, kwaunogona kutoona preview.
Mukuwedzera, ikozvino zvichave zvakare inowanikwa Linux, chimwe chinhu chaive chisingafungiki panguva iyo Commandos 2 yakaburitswa. Izvo zvakare zvichauya kune macOS uye zvechokwadi Windows. Gare gare zvakarongerwa kuiburitsa iyo Xbox, PlayStation uye Nintendo. Mapuratifomu mazhinji ayo anga asingawanikwe kare. Zvinotaridza kuti Kalypso Media ine mapurojekiti makuru emutambo wevhidhiyo uyu. Ndine chokwadi chekuti ichave nevateveri vashoma zvakare.
Kune avo vasingazive Kalypso Media, ndiro boka rakatenga kodzero dzefranchise kubva kuPyro Studios, mukadzi wechiSpanish uyo akasimudzira zita muzuva rake. Yakawana zvakare kodzero kune veParaetorian iyo ichaburitswa seParaetorians HD Remaster, iro zita rakafanana kubva kare asi rakagadziriswa sezvakaitwa nemaCommandos. Nenzira, kana iwe uchinetseka kuti vachasvika riini, zvinoita sekunge imwe nguva muQ4 ye2019… Saka isu tinofanirwa kumirira kunyangwe yakati rebei. Asi ichauya!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Commandos 2 HD Remaster yeLinux
Linux yakanyatso kutonga pamusoro pevane mazana mashanu mumasimba epasirose epasirose
Vivaldi 2.6 inosvika ichivharidzira kushambadzira kusinganzwisisike uye kugadzirisa mashandiro